POETRY AND SHORT STORIES – OROMP4 Studio
Qabsoo Oromoo erga gaafa Oromoon cabee diina jala galeetii xawaalwaallummaan siyaasaa baduurraa dhaloota adhalootatti akka riqichaa walii daandii tahee as gahe.
Osoo hin cabin haallii akkasii karaan ittiin eeganiifi ittisan sirni abbaa Oromoo waan tureef akkaan dhorkaafi eeggamaa ture. Jala bultii cabiinsa OROMOO jaarraa 18ffaa keessa kaasii hanga dhuma yoona jaarraa 21ffaatti nuwaliin jira.
Dhaloonni karaa kanaan waan daraaraa argaa jiran; kuni hin badu taanan dhaloota dhufuufis kanuma galaasuf teenya.
Osuma jennuu xawaalwaallummaan siyaasaa kan maddu qaruxummaafi abshaalummaa irraa jedhee hin yaadu ani. Kuni kan maddu dhaabbii (political position and ideology based on what someone is fighting for) dhabuudha. yoo waan kaayyoo kiyya kuni jetee lafa hin kaayannee fi galman ittiin gaha jettee hin qabaanne qilleensa salphaafi bubbee hundatu nama raasa. Namoota baayyee yeroo yeroon ifanii deebi’aniimmoo dhaaman yoo argite akeekaa dhaabbataa fi dhugeeffannoo muummedhaa hin qaban.Gaafa siin wal falman jinniileen nuuf hojjannaan, diinnillee waan nuti feenu hojjannaan rakkoo maal qaba yoo waliin taanee hojjanne siin jedhu.
1.Tasumaa diinni dantaan isaa keessa hin jiru taanan waa siif hin godhu; keessuma akka ati barbaaddettii fi manii ati qara akeekkatte siif geechisuuf waan hojjatuu mitii yaadullee hin qabu.
2. Kan biraammoo garee fi kaayyoo muummee namni biraa hin beekne kan garuu isaan sammuyyaa dhoksaa keessatti baatan guyyaa tokkoof afaan gaarii dubbannaan hardhuma gootumsuu, faarsuufi waanuma xiqqoonimmoo deebi’anii arrabsuufis dhihoo jiru.
Mammaaksa tokkon yaadadhe,” kan aayyoo fuudhe hunduu Aabboo” jedhan tokko. Kan aayyoo fuudhe yoo abbaa gudeedaa hin taane abbaa osoo hin tahin abbaa Buddeenati.Abbaan Buddeenaa haguma aayyoo of jalaa qabutti malee aayyoon wal dhabnaan abbaa osoo hin tahin orma.Ormimmoo halagaadha. Halaagaan diina tahuuf waan hedduu hin feesisu.
Kana hundaaf maddisaa dhaabbii jabaa irra dhaabbatanii qabsoo godhan dhabuudha.
Tarii namoonni tokko tokko Lakkii haalli akkasii bar (political flexiblity) nuun jechuu malu. Tarsimoon siyaasaa adeemsa ittiin kaayyoo dhaabbataa galma ittiin gahuuf diina moo’attuun malee kaayyoo muummee asiifi achi jijjiirtee nama burjaajessuu ykn afaan faajjessuu miti…
Namoota tokko tokko Qabsootu dhala; isa kaanimmoo qabsootu fuudhee sokkaan, kaanimmoo qabsoo dhaala, inni kaanimmoo ofiifuu qabsoo dhala! kamtu gaarii fi kam filannaan kan abbaati!Waaqni Oromoo fi ekeraan qabsaahota Oromoo ,Oromoo haa bilisoomsu, nu waliinis haa ta’u!